Madaxweyaha Puntland:”Sharciyada wadanku waa Federaalisim ama rab ama ha rabin” | puntlandi.com
Madaxweyaha Puntland:”Sharciyada wadanku waa Federaalisim ama rab ama ha rabin”
Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay Nidaamka Federaalisimka, Federaal-diidka iyo arrimo kale.
Gaas oo la hadlayay Jaaliyadda reer Puntland ee London ayaa sheegay in Puntland ay gaartay hadafkii ay ka lahayd Soomaali.
”Waad og tihiin Puntland waa meeshii ugu horaysay ee Federaalisimka laga hirgaliyo waa Hooyada iyo Aabaha Federaalka, waxaan ku faraxsanahay in ajandahaas uu noqday mid dhaboobay oo Soomaaliya meel kasta laga abuuray dawlad goboleed waan soo dhoweynaynaa” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Gaas ayaa sheegay in sharciyada wadanku uu yahay Federaalisim, isla markaana aysan ku xirnayn rabitaanka iyo jacaylka qof iyo Koox.
”Sharciyada wadanku waa Federaalisim, ama rab ama ha rabin ama jeclow ama ha jeclaan waa sharciga wadanka, annigu waxaan aaminsanahay inuu Soomaaliya dawo u yahay, laakiin inuu xun yahay inuu wannaagsan yahay wali ma tijaabine hala gaaro” Ayuu yiri Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata.
Wuxuu intaas ku daray”…..Soomaaliya dawlad baan ahayn Xamar baa duntay markii Xamar ay duntay Soomaaliya oo dhan waa duntay, sabab, haddii Xamat ay duntay, maxay Baydhabo iyo Garowe u dumaysaa, taas waa awoodii dhan ayaa hal meel taalay, marka ma waxaan rabnaa in 30-sano ka dib ay taasi dhacdo, hadda Xamar waxay qabato waxba kama ogin, wax badana kuma qabno, haday fiicnaato Alxamdullilaahi, haday xumaatana meesheena ayaan joogayna”.
Ugu Dmabayntii wuxuu sheegay in Federaal-diidku ay ku doodaan in Nidaamka Federaalku uu kala qaybinayo Ummadda Soomaaliyeed, arrintaas oo uu sheegay inay tahy riyo mala awaal ku dhisan.